Mpanatanteraka serivisy fanatanterahana | Serivisy fanatanterahana China Souring & Trader
Serivisy fanatanterahana an'i Shina
Serivisy fanampiny soatoavina
Ahoana no nanampian'ny serivisy pick and pack anay ny mpanjifa? Hoy ny mpanjifa: Gaga be aho fa tena tsara tarehy ny fonosan'ny vokatra, tafatoetra ny vokatra, ary afa-po be ny mpanjifa. —— Roman Manolotra tolotra feno sy fonosana fenoina namboarina mifanaraka amin'ny filàn'ny orinasanao izahay! 99,6% ny tahan'ny fitadiavam-bola mifangaro tanteraka amin'ny tranokalanao sy ny fivarotana sehatra Fanaraha-maso ny tahiry mandeha ho azy manavao ny serivisy iray andro fanompoana
Inona ireo serivisy fanatanterahana? Ny serivisy fanatanterahana dia trano fanatobiana entana an'ny antoko fahatelo izay manomana sy mandefa ny baiko ho anao. Izy io dia manao izany avy amin'ny ivon-toerany. Ny serivisy fanatanterahana ny ecommerce dia mety indrindra amin'ireo orinasa tsy te-hiatrika ny fandefasana entana na nihoatra ny fahaizan'ny mpivarotra efa misy ka tsy afaka mandefa baiko intsony izy ireo. Fanatanterahana automatisation 1.Sunson API dia ahafahanao mampiditra ny tranokalanao sy mampifanaraka ny angona. 2.Fampidirana miaraka amin'ny ...
Fahatanteraka ny làlam-pivarotana Shopify tsotra miaraka amin'ny Sunsoneorot. Manampy ireo mpivarotra Shopify izahay hanatanteraka ny baiko haingana sy haingana araka izay azo atao mba hahatratrarana ny andrasan'ny mpanjifa. Shopify dia miharo volo miaraka amin'ny rindrambaiko hamerenana ny fitantanana sy ny fitantanana lisitra, ahafahanao mifantoka amin'ny fivarotana sy fampitomboana ny orinasanao - tsy manahy ny fahatanterahan'ny filaminana Fampidirana mora Mampifandray ny fivarotana Shopify anao amin'ny rindrambaiko fanatanterahana Sunsoneorot amin'ny dingana vitsivitsy monja. Ampifandraiso ny fivarotanao ...
Manomeza marika ny tenanao amin'ny serivisy ampiana lanjany anay! Fanatsarana ny marika 1. Manisy fampidirana marketing mba hampifaly sy hitazomana ny mpanjifanao. 2. Famerenana ireo vokatrao anaty boaty namboarina, amin'ny fombanao tianao. 3. Ny kitapom-batsy sy ny fivondronana dia manatsara ny fantsom-bokatrao ary manatsotra ny fizarana fizarana. 4. Ny lableling dia dingana manahirana nefa manan-danja ka raisinay ho anao izany, ary apetrakao araka ny tokony ho izy ny marika mba hahazoana antoka ny fahitana ireo vokatrao. Supply Chain Service Amin'ity ma ...
Manome serivisy fitehirizana entana mahomby, azo antoka ary maimaim-poana any Shina Manana trano fitahirizam-bokatra 3000 + metatra toradroa any Shenzhen izahay, Manolora fampiasana maimaim-poana mandritra ny telo volana ho an'ny mpanjifa vaovao, ary koa maimaim-poana aorian'ny 3months mifototra aminao manana kaomandy fandefasana farafaharatsiny 60Pcs isam-bolana, trano fitehirizam-bokatra 3000m² afaka mahafeno ny filanao fitomboan'ny filànao, manodina haingana ny baikonao ary miomana amin'ny fandefasana. Izahay Warehouse China dia mitazona ny tahiry azo antoka, feno amin'ny fanaraha-maso sy fiantohana 24/7. Step1 ： Warehouse Recei ...
Ny tombontsoa azo avy amin'ny dropshipping Dropshipping dia maodely lehibe ho an'ny mpandraharaha maniry hanomboka satria mora azo izany. Miaraka amin'ny dropshipping, azonao atao ny manandrana haingana ny hevitra momba ny fandraharahana miaraka amin'ny fika ambany voafetra, izay ahafahanao mianatra zavatra betsaka momba ny fomba hisafidianana sy hividianana vokatra tadiavina. Ireto misy antony hafa mahatonga ny dropshipping modely malaza toy izany. 1. Ilaina ny renivola kely Mety ho ny tombony lehibe indrindra amin'ny dropshipping dia ny ahafahana mandefa fivarotana ecommerce ...